भगवान भरोसा : कोरोना महामारी भयावह बन्दै - News site from Nepal
भगवान भरोसा : कोरोना महामारी भयावह बन्दै
काठमाडौं – नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै कोरोना महामारी भयावह बन्दै छ । संक्रमितले अस्पतालमा उपचार पाउन कठिन भइरहेको छ । यही वेला सरकारले देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी संक्रमण बढेको भन्दै ‘हात उठाएको’ छ ।
‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शड्ढया उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ । त्यसैले सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा संवेदनशील हुन हार्दिक अनुरोध छ,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको संवेदनशील भई कडा रूपमा पालना गर्नु–गराउनु पर्नेछ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण पैmलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबैजना संवेदनशील बनिदिनु हुन हार्दिक अपिल छ ।’
‘सबै अस्पतालले अब कस्ता अवस्थाका बिरामी मात्रै भर्ना गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ,’ टेकु अस्पतालका कोभिड चिकित्सक डा. अनुप बास्तोलाले भने, ‘स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ भने त्यस्ता बिरामी रिपोर्ट नेगेटिभ नआउँदासम्म बेडमा राखिरहनु पर्दैन । औषधि र काउन्सिलिङ गरेर घर पठाई अर्को गम्भीर बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्छ । अहिले हामीले आवश्यकता हेरेर मात्रै भर्ना लिन थालेका छौँ ।’
उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा कोरोनाका लागिसम्म एक हजार एक सय ३२ शैंया तयार छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शुक्रबार साँझसम्म सात सय ६९ शैंया भरिएका छन् । उपत्यकाका तीन निजी अस्पताल ग्रान्डी, ह्याम्स र नेपाल मेडिसिटीले पनि संक्रमितको उपचार गरेको तथ्यांक मन्त्रालयमा पठाएका छन् । यी अस्पतालमा कोरोनाका लागि छुट्याएका बेडभन्दा एक सय एक बढी बिरामी भर्ना छन् । तीनवटै अस्पतालमा गरेर ६४ आइसोलेसन बेड छन् भने शुक्रबारसम्म एक सय ६५ बिरामी भर्ना गरिएका छन् ।
२४ घण्टामा ३३ को मृत्यु,
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, धनुुषा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढिरहेको छ । त्यसैबीच खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापालाई कोभिड– १९ को संक्रमण भएको छ । उनको पिसिआर परीक्षणका क्रममा शुक्रबार बिहान संक्रमण
पुष्टि भएको स्वकीय सचिव राजेन्द्र गौतमले बताए । मन्त्री थापाकी छोरी उष्णता श्रेष्ठ थापालाई संक्रमण भएपछि उनको बिहीबार स्वाब संकलन गरिएको थियो । उनकी छोरीलाई चार दिनअघि संक्रमण भएको थियो । यसअघि ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कोभिड– १९ को संक्रमण भएको थियो । उनी सैनिक अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
दुई महिना सबै जुटेर लडौं–डा. अनुप बास्तोला
निजी–सरकारी गरेर हजारौँ बेड राजधानीमा मात्रै छ । कोभिड अस्पतालबाहेक सबै अस्पताल खाली छन् । ओपिडी सेवा बन्द छ । सामान्य शल्यक्रिया रोकिएकाले कोभिडबाहेकका अस्पतालका बेड खाली छन् । ती बेड पनि राज्यले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । सबै जुटेको खण्डमा क्षति हुँदैन, जुट्न सकेनौं भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट